Shirkii Kasocday Doolow oo Is Afgarad ku soo dhamaaday (Daawo Sawirada) – STAR FM SOMALIA
Waxaa maal mihii la soo dhaafay magaalada Doolow ee gobolka gedo ka socday wada hadalo toos ah oo u dhexeeyay Masuuliyiinta Maamulka Jubbaland iyo Siyaasiyiinta gobolka Gedo.
Wada hadaladaasi oo looga gol lahaa xalinta khilaafaadka Siyaasiyiinta gobolka iyo weliba saluug ay qaar ka mid ah siyaasiyiinta gobolka ka qabeen dhismaha xukuumadda iyo baarlamaanka Jubbaland.
Shirka oo maanta galay maalintii labaad ayaa waxaa dhanka Maamulka Doolow u matalaayay Siyaasiyiinta kala ah Maxamuud Seyid Aadan, Maxamed Cabdi Kaliil, Maxamed Awlibaax iyo siyaasiyiin kale waxa ayna maanta heshiis rasmi ah la galeen Hogaamiyayaasha sare ee Maamulka Jubaland oo maal mahan ku sugnaa degmada Doolow ee gobolka Gedo.
Shirka ayaa waxaa laga soo saaray qodobo muhiim ah oo ay ka mid yihiin in Dastuurka Maamulka Jubbaland dib u eegis lagu sameeyo waxna laga bedelo.
Muhiimada heshiiska ayaa ahaa in Arimaha Baarlamanaka, Dastuurka iyo waliba sidoo kale hawlaha madmadowga ku jiro meesha laga saaro iyada oo la eegaayo maslaxada isku imaatinka Maamulka, waxa ayna isku raaceen inay dhameeyaan isimada Jubbaland oo adeegsanaya hay’adaha xalinta khilaafaadka Jubbaland.
Ugu danbeyntii wada hadalada ayaa waxaa goob joog ka ahaa Madaxweynaha Maamulka Jubbaland Axmed Maxamed Islaam iyadoo si guul ah lagu soo gaba gabeeyay Wada hadalada Doolow shalay ilaa Maanta kasocday.
Waxyaabaha la isku raacay waxaa kale oo kamid ah in la dar dar galiyo Xoraynta Deeganada kale ee wali gacanta Alshabaab ku jira gaar ahaan Gobolka Jubada Dhexe.